အဆိုးဝါးဆုံးကတော့ လိင်အင်္ဂါမှာဆေးထိုးခြင်းပါပဲ။ ဆေးထိုးပြီးနှစ်ပတ်အကြာ လိင်အင်္ဂါသိသိသာသာကြီးထွားလာပေမယ့် လိင်ဆက်ဆံရာမှာ မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာတွေ့လာကြတယ်။ Sexual Life က အားရကျေနပ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော် လင့်ခဲ့သည့်တိုင် ကျားရောမပါ Sexual Pleasure အပြည့်အ၀မရကြဘူး။ အဓိကပြဿနာက အမျိုးသားတွေမှ ထိတွေ့မှုနဲ့ အာရုံခံစားမှု မရတော့ခြင်းပါပဲ။ "
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တိုင်းက ဒီ Case နဲ့ မလွတ်ကင်းကြပါဘူး။ခွဲစိတ်လူနာအယောက်(၁၀၀)မှာ (၅)ယောက်က ဒီကိစ္စနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲပြဿနာပေါ်နေပါစေ။ဒီစွန့်စားမှုက လျော့သွားတဲ့အပြင် ပိုတောင်များလာတယ်။" လို့ခွဲစိတ်အထူးကု ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဝင်းမြင့်ကဆိုပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းက အပေါင်းအသင်းစကားနားယောင်မိ ခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားကြီးထွားလိုခြင်း၊ အမျိုးသမီးအပေါ်စိတ်ကျေနပ်မှု ပိုရစေလိုခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးခိုင်မြဲလိုခြင်း၊ အရွယ်လွန်သည့်တိုင် ကျားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလိုခြင်း၊ စိတ်ဆန္ဒကို ရှေ့တန်းတင်လိုခြင်းတွေကြောင့်ပါပဲ။ ပြဿနာဖြေရှင်းရသူအများစုဟာ အသက်(၄၀ မှ ၅၀) အတွင်းရှိ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသားများပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား တွေ ဆေးဝါးမှီဝဲခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါပြုပြင်ခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့လည်း ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိနေပါတယ်။ အမျိုးသမီး တွေက ဟိုမုန်းပြောင်းလဲလာလို့ လိင်စိတ်ဆန္ဒကျဆင်းနေချိန်မှာ အမျိုးသားတွေက လိင်စိတ်ထက်သန်ဆဲပါ။
ပထမအဆင့်လောက်နဲ့ ထူးခြားမှုမရှိဘူးဆိုတာကလည်း လိင်အင်္ဂါရဲ့ ပျက်စီးမှုပမာဏနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသား တွေက ခွဲစိတ်အောင်မြင်မှုမှာ (၅၀%)အောက်လျောကျသွားပြီဆိုရင် ရှော့ခ်ရသွားတာချည်းပါပဲ။ ဒါကလည်းထိုးဆေးရဲ့ ပမာဏနဲ့ လူတွေရဲ့ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအင်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ထိုးဆေးကြောင့် လိင်အင်္ဂါကနေ ကပ်ပယ်အိတ်၊ ကပ်ပယ်အိတ် ကနေ နောက်ဆုံး ဆီးခုံတစ်ပြင်လုံးအထိ ယောင်ရမ်းလာပါတယ်။ (ပ)အဆင့် လိင်အင်္ဂါကိုခွဲစိတ် ရမည်။ (ဒု)အဆင့် ကပ်ပယ်အိတ်ကိုခွဲစိတ်ရမည်။ နောက်ဆုံးအဆင့် ဖြတ်ထုတ်ပြီး အရေပြား အစားပြန်ထိုးရမယ်။ အရေပြားရဲ့ သဘာဝက ပျော့ပြောင်းပေမယ့်၊ ဆီလီကွန်ကြောင့် အရေပြားမှာရော အဆီပြင်မှာပါမာပြီး ဆင်ခြေထောက် ရောဂါလို အရေခွံတွေ ထူသွားတတ်တယ်။ ထူနေတဲ့ ဆီလီကွန်တွေကို ထုတ်လိုက်ရင် အတွင်းထဲမှာ အသားမရှိတော့လို့ မိမိရဲ့ ကောင်းနေ သေးတဲ့ ကပ်ပယ်အိတ်မှ အရေပြားကိုသော်လည်းကောင်း၊ မိမိပေါင်မှ အရေပြားကိုသော်လည်းကောင်း အစားပြန်ထိုး နိုင်ပါတယ်။ မကုတာထက်စာရင် ကုသလိုက်တော့ လိင်ဆက်ဆံရေးဘ၀ မဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့် မဟုတ်ဘဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ကြောင့် ဆိုရင်လည်း ကုသရင် Normal အခြေအနေကို ပြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဘ၀ဆိုတာ အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံတယ်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။
ယောက်ျားတိုင်းဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ရင် အချိန် တိုင်း၊အခါတိုင်း ရာနှုန်းပြည့်ဖြည့်ဆည်းစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆုံးရှုံးသွား ခဲ့ရင်လည်း စိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုပါဘူး။ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားရင် မအောင်မြင်စရာမရှိပါဘူး။ ရာနှုန်းပြည့် မအောင် မြင်ခဲ့ရင်တောင် အဆင့်တစ်ခုအထိ ပြန်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ခေတ်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ။
နည်းပညာတွေ တိုးတက်ကောင်း မွန်လာတာနဲ့အမျှ လိင်မှုဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမှုရှိအောင် ခေတ်မီပစ္စည်းတွေသုံးပြီး ဆန္ဒဖြည့်ဆည်းလို့ရနေပါပြီ။ ဥပမာ- ဒုတိယအဆင့် မရောက်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ မိမိလိင်အင်္ဂါအတွင်းကို Implant လို့ခေါ်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ခွဲစိတ်အစားထိုး ပြီး အမျိုးသမီးတွေစိတ်ကျေနပ်မှုရအောင် ရာနှုန်းပြည့် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်။ သို့သော် လူမသေပဲ ဘ၀သေနိုင်တဲ့၊ သဘာဝကိုလွန်ဆန်တဲ့ ပြုမူလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ Don't think, don't do unnecessarily. Stay healthy in good ways.
(Written by ဇာနည် @ Alex aung)
Posted by Alex Aung at 10:48 AM
A Wanking Scare Remembered
“ကျွန်တော်သာ Gay တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရင်”